hataru/हटारु: November 2008
दाङबाट टीकाराम उदासीले फोन गर्नुभएको थियो । रेडियो मध्यपश्चिमको स्टेशन म्यानेजर छाड्नेबारे राय माग्नुभयो । कलेजमा पढाउँदै सिर्जनामा कि्रयाशील एउटा स्रष्टाको लागि स्टेशन म्यानेजर घाँडो नै थियो । मलाई यस्तै लाग्यो । त्यसैले उहाँको छाड्ने निर्णयलाई स्वाभाविक प्रतिकि्रया दिएँ । धेरै भयो केही लेख्न सकेको छैन । समाचारको पछि लाग्दालाग्दै दिन बितेका छन् । जीवनका अनुभूतिलाई सुरक्षित गर्ने कतै पनि पदचाप सुरक्षित छैनन् । भातको पछि लाग्दालाग्दै अनाम काठमाडौंमा आफैसँग अनचिनार भएजस्तो लाग्न थालेको छ । कुनै याममा सोचेको थिएँ लेखनमै आफ्नो पहिचान बनाउँछु । तर भातको पछि लागेर त्यो बाटो कताकता भुलेजस्तो लाग्न थालेको छ । केही दिनअघि पोखरामा धेरै लेखकहरु भेटिए । आफ्नो परिचय बनाएकै त्यै लेखन थियो मेरो । मलाई जतिले चिनेका थिए लेखनबाटै थियो । सबै लेखकहरुको एउटै प्रश्न थियो -खै लेखेको जबाफमा चार पैसाको दाँत देखाएर फिस्स हाँस्नुबाहेक अर्को उत्तर थिए मसँग । भातको पछि दगुर्दादगुर्दै रोजेको त्यो बाटो नै कहाँ छाडेछु कहाँ । टीकाजीको फोनपछि भात र आफूले रोजेको बाटोको दोबाटोमा मन पनि दोबाटोमै उभिएको छ- मैले भात रोजूँ कि मैले रोजेको बाटो कन्फ्युजमा छु -कुन बाटो हो मेरो भात हो या
Posted by Nabin Bibhas at 12:54 AM No comments:
के गर्लान् महराले मैना
पुतलीजस्ती केटी । कविता लेख्छे । गीत लेख्छे । गाउँघर र स्कुलको पि्रय छे । पढाइमा पनि तेज छे । एउटी दलित केटी । कुनै फिल्मको पात्राजस्तै पोख्त छे । दोलालघाट आँखाशिविरमा आमाका आँखा जँचाउन माइत जान थालेकी आफ्नी आमालाई- आमा छिटै आउनू है । मेरो जाँच पनि आइसक्यो । भाइहरुले पढ्न दिदैनन् । तर उसकी आमा माइत पुगेकै साँझपख पाँचखालका सेनाले लान्छन् । त्यसपछि कहिल्यै फिर्दैन । उसकी आमा छोरीको खोजमा सारा ठाउँ धाउँछे । आखिरमा मारिएको स्वीकार्छन् । ५ फागुन २०६० मा काभ्रेको पाँचखालस्थित तात्कालीन शाही नेपाली सेनाद्वारा मारिएकी मैना सुनारको कथामा उनेको फिल्म हो ुमैनाु । यसको पि्रमियर शोमा थिए -संचारमन्त्री कृष्णबहादुर महरा । संकटकालका भयावह दिन फर्केका थिए पर्दामा । यता थिए मन्त्री महरा । नेपालको सबैभन्दा जटिल याममा फरक्क फर्काउने याम पर्दाम्ा आएपछि कहाँ पुगे होलान् महरा सल्यानमा झण्डै परेका थिए महरा । मुश्किलले बाँचेका थिए । कार्यकतालाई जस्तो ऐया ऐया त परेन होला तर कम्ति जोखिम त उनले पनि किन नमोल्नु । आइरहेको थियो -सेनाका ज्यादती । सर्वसाधारणको बेपत्ता र हत्या । तर तिनै शाही सेनाका हाकिम र जवानहरु छाती फुलाएर कुरा गर्दैथिए । मैनाकी आमालाई थर्काउँदैथिए ।दुनियाँ बदल्न नयाँ नेपालको सुन्दर सपना उनेर लागेका थिए लाखौं युवा माओवादीम्ाा । जीवनका सबैभन्दा उर्वर याम युद्धको भुमरीमा होमे । सिक्ने उमेरमा सपना फलाउने खेतमा हाम फाले । सयौं मैना सुनारहरु मारिए । बेपत्ता पारिए । नेपालमा लोकतन्त्र पनि आयो । जसले लाखौं युवाहरुलाई सपनाको सहर देखाउँदै लगाए युद्धमा तिनै नेतामध्येका एक महराले हेरिरहेका थिए पर्दामा । उतिखेर उनी जटिल मोडमा थिए । नयाँ नेपाल बनाउने सपना बाँड्दै िहंेडेका थिए । तर उनै यतिखेर देशको मुहार फेर्ने कुसर्ीमा थिए । र यतिखेर हेदैथिए पर्दामा भयाबह चित्र । दारुण कथा । सेना र प्रशासनका ज्यादती लापर्बाही फिल्मभरि पोखिएका थिए । लोकतन्त्र आयो फिल्ममा पनि । जसरी आएको छ बाहिर । तर महराको छेउमा िठंग उभिएका थिए उनै पुरानो शाही सेनाको जवान । मैनाकी आमा उस्तै थिइन् फिल्ममा र यथार्थमा पनि । तर महरा मन्त्री थिए । सेनाका ती पातकी अधिकारीहरु सुनापानीले छर्केजस्ता कुरा गर्दैछन् अहिले पनि । मैना मारिइन् । तर उनले न्याय अझै पाएकी छैनन् । सपनाको पछि लागेर महरासँगै लागेका कति मैनाहरु होलान् के सम्झे होलान् उनले पर्दामा हेरिरहँदा मेरो मन घरी पर्दामा हेरिरहेका महराका अनुहारमा गयो घरी पर्दामा । लोकतन्त्र आए पनि कटुवाल उस्त गर्जिरहेको छ । कुनै बेलाका बहुचर्चित बादल रक्षामन्त्री बने । तर भैरवनाथ गणका बेपत्ताका समेत िझंगा मार्न सकेनन् । कुनै पहल गरेको देखिदैन । यी मैनाहरुले कहिले पाउने हुन् न्याय के महराले यसको जबाफ देलान् फिल्म सकिए पनि अनुत्तरित प्रश्न सकिएको थिएन । त्यही अनुत्तरित प्रश्न बोकेर बाहिरिदा आज असाइन भएको राष्टिय सभागृहको प्रचण्डको कार्यक्रम छुटिसकेको थियो । ुला अब के गर्ने होला ु यत्रैसिति भन्ने लागेर अफिस आएँ । साना सर रिसाए -त्यो हेडसरको असाइन हो । अब के गर्ने थाहा छैन अब के गर्ने
Posted by Nabin Bibhas at 2:07 AM No comments:
ओबामा बोकेर आएको नयाँ पत्रिका
अस्तिको दिन मेरो जीवनको लागि सुखद् रह्यो । बिहानै नयाँ पत्रिका लिएर भित्र पस्दा अनौठो अनूभूति गरेको थिएँ । कारण थियो -नेपाली पत्रकारिताको इतिहासमै सबैभन्दा पहिले नयाँ पत्रिकाले रिपोर्टरको फोटोसहित समाचार छापेको थियो ।
संयोग ! त्यो मेरो समाचार परेको थियो ।
ब्लग र फेसबुकसँगका साँझ
अचेल अबेर फर्कन्छु डेरा । विमल आएको छैन । डेरा पनि अव्यस्थित छ । आठ कक्षा पढ्न थालेदेखि डेरामा बसेको जिन्दगी डेरामै छ । थाहा छैन कहिलेसम्म हो । तर यति लामो डेरा बसाइबीच पनि डेरालाई कहिल्यै व्यवस्थित गर्न सकिनँ । मलाई थाहा छैन म नै अव्यवस्थित हँु या मेरो डेरा साथीहरु गाली गर्छन् । डेरामा छरिएका किताब देखेर हकार्छन् । अव्यवस्थित जिन्दगीका पानाहरु जता पल्टिए पनि उस्तै हुँदारहेछन् । लिबाङ आएँ । उस्तै । नुवागाउँ गए । उस्तै । चुनबाङ गएँ । उस्तै । दाङ झरें क्याम्पस पढ्न । त्यहाँको डेरा पनि उस्तै । र अचेल छु काठमाडौंमा । यहाँ पनि उस्तै । डेरामा मेरो कम्प्युटर कीराले सत्यानाश पारेको छ । अचेल त अन गर् यो कि झिमिझिमिक गर्छ । अस्ति स्कान गर्न खोजेको दुई हजारको हाराहारीमा कीरा भेटिए । अब के गर्ने कीरा मार्ने हालौं नेट छैन । के गर्ने के गर्ने भएको छ । हिजो पनि चाउचाउले रात काटियो । आज पनि अफिसमै चाउचाउ पकाउन लगाएँ । अनितालाई भनेको थिएँ -चाउचाउ नखाऊ है मेरी साथी । स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ । तर अचेल आफैले चाउचाउ खाइरहेको छु । थाहा छैन मैले चाउचाउ मैले खाइरहेछु या चाउचाउले मलाई । अँ भन्दैथिएँ मेरो साँझ अचेल खासगरी समाचार लेखिसकेपछि हुन्छु फेसबुकमा । नयाँ नयाँ साथीहरुसँग आफ्ना अनुभूति साट्न पाउँदा अर्कै अनुभूति हुन्छ । शनिबार मात्र फेसबुकसम्बन्धि स्टोरी झन नयाँमा सहकर्मी प्रमिलाजीले लेख्नुभएको थियो । सायद यसको चाप झन बढ्ला । अँ फेसबुमा धेरै नयाँ साथीहरुसँग कुराकानी गरें । सीमा दाहालसँग लामो कुराकानी भयो । विज्ञान संकायबाट स्नातकको फाइनल दिएर बसेकी रहिछन् । अनामनगरकी सीमालाई लेख्न रुची रहेछ । पत्रकारितातिर पनि उनको रुची रहेछ । केही लेखेको र छाप्न मन लागेको बताइन् । उनीसँगको कुराकानी रमाइलो भयो । दिउँसो गुणराज लुइँटेल दाइसँग पनि कुराकानी भयो । रोल्पामा दैनिकीको लागि चाहिएको छ कि भनेर सोधें । अहिले मिलाइरहेको बताउनुभयो । हिजो कथा सम्पादन गर्दै थिएँ । तर जाँगर चलेन । के भो के भो । आज कभर स्टोरीका लागि एउटा समाचार बनाउँदैथिएँ तर अर्को गर्नुपर् यो । संयोग त्यो स्टोरी पनि मेरै थियो । सशस्त्र समूहहरु सरकारसँग वार्ताका लागि सम्पर्कमा आएको समाचार थियो । मुश्किलले शान्तिमन्त्री प्रभाकरको कोड लिएँ । सम्पर्कसूत्रलाई ५० हजार दिने समाचार सायद खगेन्द्र पन्तले लेख्नुभएको थियो त्यो समाचारले फायर भएका रहेछन् । त्यसले धेरै अप्ठेरो पारेको बताए । खासमा उनीहरुलाई दिने नभई सम्पर्कका लागि चाहिने खर्चपर्च रहेछ । सम्पर्क बारम्बार भइरहेको कुरा गरे । समाचार लेखेपछि केही दिनयताका साँझजस्तै फेसबुक र ब्लगमा लागें । मेरा पाठक ! साँच्ची तपाई्रका साँझ कसरी बितिरहेछन् हँ मेरा साँझ फलदायी हुने गरी बितिरहेछन् या नाई मलाई नै थाहा छैन ।
Posted by Nabin Bibhas at 9:03 AM No comments:
मैना हेर्न प्रचण्ड
भोलि बिहान ुमैनाु फिल्मको पि्रमियर शो छ । कस्तो बनेको छ मलाई हेर्न मन छ । मैनाकी आमालाई मैले ुसारी सोल्जरुमा देखेको थिएँ । अमेरिकन पत्रकार जुलीले बनाएको उक्त डकुमेन्ट्रीमा उनलाई देखेपछि लागेको थियो -मैनाकी आमाजस्तै धेरै आमा हुँदा हुन् त मैना सुनारहरु सेनाद्वारा बलात्कृत हुँदै मारिने थिएनन् कि अबोध बालिकाहरु यसरी मारिने थिएनन् होला । पाँचखालमा माओवादीको आरोपमा सेनाले लगेको मैना कहिल्यै फर्किएनन् । बरु उनलाई बलात्कार गरेर मारियो । जंगलमा गाडियो । मैनाकी आमाले साहस गरिन् । सारा ठाउँ चाहारिन् । आखिरमा मेनाको शव राखिएको ठाउँबाट उनको अवशेष निकालियो । थाहा छैन दोषीले सजाय पायो या पाएन तर मैनाकी आमाले देखाएको साहसलाई जसले पनि प्रशसा गर्छ । धेरै मैनाहरु सेनाबाट बलात्कृत भए । मारिए । कसको नाउँमा माओवादीको । कति होलान् मैनाहरु यो मुलुकमा कस्तो भएको छ कुन्नि मैना फिल्म जसको नाउँमा हजारौं नेपाली मारिए । जसको नाउँमा समाजका सबैभन्दा तल्ल्ााे तहका जनताले सपना उने । थाहा छैन यी सपना कहिले पूरा हुन्छन् तर भोलि प्रचण्ड मैना फिल्मको उदघाटनमा आउँदैछन् । के भन्लान् र के गर्लान् मैना हेरेर हेर्न बाँकी छ । के भन्लान् हँ प्रचण्डले
Posted by Nabin Bibhas at 9:03 AM2comments:
बेताल बेताल जिन्दगी
इश्माली सरको फोन आएको थियो । अनुवादको लागि मेरो कथा छनौट भएको र तुरुन्त दिन ताकेता गर्नुभयो । पत्रकारिता मेरो करिअर होइन । रोटी मात्र हो । आफ्नो पहिचान खोज्ने काम लेखनबाटै गर्छु भन्ने थियो । छ पनि । रोटीका समाचारले बचाउने केही समय मात्र हो । दीर्घकाल होइन । तर त्यै रोटीकै पछि लागेर जीवनका सबैभन्दा उर्बर याम पोखिइरहेको छ । सायद मेरो जस्तै अरु मेरा साथीहरुको पनि । महिनौं बितिसक्यो केही लेखेको छैन । अचेल त लेखकहरुले पनि कार्यक्रममा बोलाउन छाडिसके । नेत्र एटम सर भन्दै हुनुहुन्थ्यो ुहामीलाई गाह्रो भयो अब कुनै किताब त निकाल्नै पर्छ । नत्र तपाईं पनि लेखक हो कथाकार हो भनेर भन्न गाह्रो भइसक्यो ।ु उहाँकै करले ६५ भित्र कथाको एउटा कलेक्सन निकाल्ने बाचा बाँधेर दसैअघि छुटेको थिएँ । त्यसको लागि पुराना कथा खोजें । मसँग भएका पनि । तर धेरै त मलाई चित्त बुझेनन् । तिनलाई सम्पादन गर्न मन छ । केही नयाँ पनि लेख्न भनेर सोचेको छु । तर लेखन भएको छैन । पटक्कै भएको छैन । समय नभएको पनि होइन समयको व्यवस्थापन गर्न नसकेको मात्र होला । किनभने कस्ता कस्ता व्यस्त मान्छेहरुले पनि लेखिरहेका छन् । उनीहरुको जीवनशैली व्यवस्थित छ । तर मेरो त एकदमै जिक्ज्याक छ । बिकलकुल जिक्ज्याक । कथा खोज्ने र तिनलाई उन्ने कुरा नभएपछि नेत्र सरलाई फोन पनि गरेको छैन । भाग्दै हिडेको छु । थाहा छैन कहिले माकुरी जालमा पर्छु कुन्नि युवराज नयाँघरे दाइले हिजो फोन गर्नुभएको थियो । ुसमकालीन नेपाली द्वन्द्व निबन्धुका लागि मेरो ुअनाथालयका नानीु निबन्ध छनौट भएको जानकारी दिनुभयो । तर मैले त्यसलाई सम्पादन गरेर मात्र राख्न भनें । त्यसलाई सम्पादन गर्ने पनि कसरी कुराकानी भएको छैन । एकपालि छलफल गरेर सम्पादन गर्छु । अव्यवस्थित जिन्दगीको जीवन-डुंगा बेतालसित गुडिरहेको छ । कहिलेकाहीँ त यस्तो नि लाग्छ यार कहाँ हो यसको गन्तव्य आफै पनि बक्क पर्छु । आफ्नो करिअरको लागि आफूलाई खर्चने याममा रोटीको लागि फनफनि घुमेको जिन्दगी देखेर मन हतास हुन्छ । निम्न वर्गीय किसान परिवारको सदस्यको लागि यो भन्दा फरक जीवन के हुन सक्छ होला र होइन समाचारको पुच्छर समाउन दौडियो बेतालसित । कहिलेकाहीँ त लाग्छ समाचार नै नभए हुँदो हो कस्तो यो मुलुक
बिहीबार बिहानैदेखि मुश्किलले एकाबिहानै बज्ने मेरो मोबाइलको घण्टी बज्यो । करिब ७ बजेदेखि लगातार आठदसवटा फोन आए । त्यसपछि त दिनभरजसो नै फोन आए । धेरै साथीहरुको प्रतिकि्रया थियो -बधाई छ । गर्न खोजेको हो नया पत्रिकाले । केही साथीहरुले त भने ुराख भनेर हो कि पत्रिकाले आफै राख्यो ु दिनभर साथीहरुका गजबगजबका प्रश्नसहित फोन आइरहे । ती फोनसँग साथीहरुका आत्मीयता पनि गाँसिएका थिए । केही साथीहरुलाई त यस्तो परम्परा अरु मुलुकमा चािहं छ भन्ने कुरा पनि थाहा रहेनछ । विदा तर सूचना विभागको कार्ड बनाउनुपर्ने भएकाले अफिस आएँ । हेडसरले सुरुमा बधाइ दिनुभयो । अन्य साथीहरुले पनि बधाइ दिनुभयो । मलाई भने त्यस्तो ठूलो कुरा के नै हो र जस्तो लागिरहेको थियो । साँझपख हेडसरले ुतपाईको फोटो खैु भन्दा ुख्यालख्यालै होलाु लागेको थियो । सूचना विभागको कार्डको लागि हेडसरसम्पादकलाई सिग्नेचर गराएँ । सूचना विभाग गएँ । एसएलसीको चारित्रिक प्रमाणपत्र छुटेछ । फर्केर आएँ । मुशिकलले कार्ड बनाएपछि वसन्त आरसी र सुरेन्द्र मल्लसँगै प्रेस काउ_िन्सलमा पुगेँ । गुरुजीलाई बधाई दिएँ । भर्खरे मात्र गुरुजीदाङका बूढा पत्रकार नारायणप्रसाद शर्मा प्रेस काउसिलको अध्यक्षमा नियुक्त भएका छन् । परशुराम काफ्ले भर्खरै राजनीतिक ब्युरो प्रमुख भएका छन् । एउटा समाचार गर्न भन्दै थिए । आज विदा नलिने कि भन्ने आशयसहितको उनको आग्रहलाई स्वीकारिनँ । विदाको दिन भएकाले मैले नलेख्ने बताएँ । केही दिनयता ममा समाचार लेख्ने तिर्खा नजानिदोगरी मरेको छ । कहिलीकसो त लेख्न खोजेका समाचारले पनि गुनासो गर्छ । न्यूज चिफ श्रीधर खनाल भन्दैथिए ुसाथीहरु चित्त नबुझेको कुरा भनम् है ।ु चित्त नबुझेका कुरा न्यूज चिफलाई सुनाएर हुने नै के हो र सबै ठीक्क पारेर आइसकेपछि सोध्नु गुनासो गर्नु नौटंकीबाहेक अरु के हुन सक्छ बिहानैदेखि बजेको मोबाइलको घण्टीले भने मरेको जाँगर ब्यंग्य गरे । तर आशिकले बाँच्ने र गालीले मर्ने भए त दुनियाँ नै किन हुन्थ्यो होला यस्तो दाङबाट उदय जीएम अन्नपूर्णपोष्ट भन्दैथिए -शेरबहादुर देउवाको मुन्तिर नवीन विभास । नवीन विभासको मुन्तिर राङ्कोट -७ जैपा लेख्न मात्र छुटेछ यार । भन्दै थिए कतिले -हाजिरी जबाफ प्रतियोगिता राखेर एउटा प्रश्न बनाउनु पर् यो -समाचारमा फोटो छापिने नेपालको पहिलो पत्रकार को हो झ्याङटुङडाँडामा शेरबहादुर देउवामाथि आक्रमण गर्ने ती छापामार प्रेमबहादुर क्षेत्री ुलक्ष्मणुसँग कुराकानी गर्दा पनि मैले यस्तो सोचिनँ ुदेउवाको समाचारमा फोटो पनि छापिएला ।ु सायद ती लक्ष्मणले पनि अनुमान गरेका थिएनन् होला ुमेरो कारबाहीको बयान नयाँ पत्रिकाको पहिलो समाचार बन्लाु भनेर । आजको अंकमा सूर्यबहादुर थापासँग परशुराम काफ्लेले गरेको कुराकानी छािपएको छ परशुको समाचारसहित । आज बिहान बधाइ दिएँ । समाचारमा फोटोको प्रसंगलाई लिएर अर्जुन पौडेल भन्दैथिए -अन्तर्वार्तामा पनि फोटो छाप्दा हुन्छ हाँसे मात्र । केही बोलिनँ । अर्जुनको टिप्पणी यस्तो थियो होला -पहिलो समाचारहुँदैमा सबैमा फोटो छाप्दै जान थाले फोटोमा छाप्नुमै प्रश्न उठ्ने हो कि हाँसेर मैले भनें -मेरो पनि अन्तर्वार्ता नै थियो यार । फरक यत्ति थियो मेरो अन्तर्वार्ता थियो पूर्वप्रधामन्त्री शेरबहादुर देउवालाई हान्ने प्लाटुन कमाण्डर लक्ष्मणको । समाचारमा फोटोको प्रसंंगले डोर् याएका फोन अझै थामिएको छैन । यो राम्रो भयो या नराम्रो मलाई थाहा छैन । तर अझै थामिएको छैन बधाइ र आश्चर्य दुवै ।
Posted by Nabin Bibhas at 9:53 AM No comments:
हाइस्कुलकी मेरी साथी । धेरैपछि दसैमा घर जाँदा भेटिएका थियौं धेरैपछि । कुरैकुरामा मैले मोबाइल हराएको कुरा गरें । यसै रिन उसै रिन बूढी भैसी किन भने झैं मोबाइल किनेको कुरा पनि गरें । र सारा सन्तुलन बिग्रेको कुरा पनि गरें । कतिखेर भनें कुन्नि रिनको कुरा गरेछु कुरैकुरामा । अचेल साँझपख धेरै बेर फोनमा कुरा गर्नु नियमीतजस्तै भएको । कुरैकुरामा उसले भनी -मैले पठाइदिउँ ऊ पनि मजस्तै हो नि घरदेखि टाढा बस्छे धनगढीमा । मेरोजस्तै सानो जागिर छ । भन्दैथिई -मैले पैसा घरमा दिनुपर्दैन । मलाई ठीक्क हुन्छ । तर यहाँ मलाई आठ नौ सयले नै महिना पुग्छ । खर्च त्यति हुँदैन । मेरो कोठभाडा नै तीनहजार भन्ने सुनेर तीनछक्क परेकी थिई । अँ भन्दैथिएँ उसले पैसा पठाइदिने कुरा गरी । ओरालो भेटे पानी त स्वाभाविकरुपमा बग्ने नै भयो होइन अँ भनेछु । नॊेभेम्बरमा बुझेकी रहिछ तलब । भनी -६ हजार पठाइदिन्छु । कहाँ राष्टिय बाणिज्य बैंकमा पठाई । छठ पर्वका कारण अस्ति पठाए पनि आज लिन गएँ । बानेश्वर भनेपछि पुरानो बानेश्वर पुगें । रहेछ नयाँ बानेश्वरमा । पट्यारिलो लाइन बसेर ती कर्मचारीको काम गर्ने शैली देखेर झण्डै बान्ता आयो । ग्राहकका काम गर्ने भनेपछि गला नै रेटिएजस्तो ठान्ने ती कर्मचारी देखेर वाक आयो । ती बूढी बूढी खालका तीनवटी च्यारच्यार मात्र गर्ने काम पनि नगर्ने । झण्डै एक घण्टापछि काम भयो । दुई सय कमिसन काटेर ल्याएँ पाँच हजार आठ सय । पाएपछि साथीलाई फोन गरेर धन्यवाद दिएँ । भनें -धन्यवादमा रिस पनि मिसिएको छ है । सुनेर खित्का छाडेर हाँसी र भनी -के पैसा दिने हँुदो त्यै पैसा खोज्नमै पैसाको सत्यानाश भइसक्यो है । भन्दैथिई -मलाई ब्याज चािहंदैन । मैले भनें -केको ब्याज भन्छ्यौ साथी सावा पनि के कसो हो लाष्टमा धन्यवाद दिदै भनें -कोई जुगमा कमाइयो भने तिरम्ला है । थाहा छैन अनिताको रिन कहिल्यै फर्काउँछु जहिले तिरे पनि अप्ठेरोमा सघाउने तिमीलाई धेरैधेरै धन्यवाद है ।
Posted by Nabin Bibhas at 9:07 AM No comments:
नयनराज पाण्डेको उलार उपन्यास यतिखेर आँखामा बल्झिएको छ । शान्तिशमशेरले चुनाव जितेपछि टाँगावालको टाँगा उलार भएको थियो । त्यसको मूल्य चुनाव जितेर काठमाडौं पुगेपछि पाएन । सायद जीवनभर कहिल्यै पाएन । मलाई थाहा छैन उलार र मेरो कथाबीच के साइनो लाग्छ तर सानो जागिरे जीवनका केही मोडमा असन्तुलन गुमेपछि कस्तो हुन्छ फेरि सन्तुलन मिलाउन मलाई थाहा छैन । ती टाँगावाल त पुगे काठमाडौं तर म कहाँ पुग्ने हो त्यो थाहा छैन । मलाई थाहा छ मेरो कहानी र उलारबीच गोरु बेचेको सम्म साइनो होला अरु छैन । दसैको मुखमै मैले मोबाइल हराएँ शान्तिनगरमा । कतारबाट पहिलोपटक घर आउँदा प्रकाशले ल्याइदिएको थियो । त्यसबेला नेपाली २१ ह्जार पर्ने त्यो मोबाइल लामो समयसम्म मैले चलाइन । कारण मसँग सिमकार्ड नै थिएन । कुनै बेला पोष्टपेड खुल्यो तर त्यो चलाउने हैसियत मसँग थिए । कहिले पि्रपेड खुल्यो त्यहाँ पुग्ने पहुँच पनि पुगेन । गीत सुन्न भिडियो हेर्न कतारतिरकै बासी सिमकार्ड हालेर चलाएँ । मेरो रुमपार्टनर सुवर्ण चन्द साथी गंगा बीसी र एमपी खरेलहरुले मोबाइलको मानहानी गरेको तर्क गरे । दुई पैसाको दाँत देखाएर ङिच्च हाँस्नुबाहेक अर्को बिकल्प पनि थिएन । एकपालि मेरो मोबाइलले तमास गर् यो -दुई सयको टिकट लिने टुँडीखेलमा ट्यापे गीत सुन्ने । के काम मलाई त्यो गीतको सम्झिएँ मेरो भतिजो विमल राजु लामाको फ्यान थियो । गंगा बीसी र मेरो लागि दुईवटा टिकट लिएँ र विमललाई ती दुईवटा टिकट दिएँ । एकजना को साथीलाई लिएर गयो कुन्नि जेहोस् उसले हेर् यो होला । मेरो मोबाइल चलाएँ केही समय छ । कुरा हो ०६३ को थालनीतिरको । केही समयपछि फेरि गंगा बीसी र मैले नमस्तेकै पि्रपेडको सिमकार्ड हाल्यौं । त्यही चलाउँदै थिएँ । भन्दैथिएँ भाइ प्रकाशले दिएको मोबाइल हराएँ । केही समय कलेज पढाएँ त्यसपछि मैले लामो समयसम्म जागिर खाएको भनेको नै नयाँ पत्रिका हो । भन्थे मान्छेहरुले -सानो जागिर भनेको सानो सिरक हो । टाउको ढाक्दा गोडा नांगो गोडा ढाक्दा टाउको नांगै । मोबाइल हराएपछि किन्नैपर् यो । यसले जीवनशैली नै फेरिदिएको छ । त्यसैले मोबाइल त आधारभूत आवश्यकता जस्तै नै भइसक्यो । किनें । किन्नै पथ्र्यो किनें । दशैताका पैसा थिएन २४ सय मात्र दिएको थिएँ । ६ सय र बिजुलीको ४ सय गरी एक हजार रुपैया पुगेका थिएन । नपुगेर पनि के गर्नु लागियो घर । मोबाइल थिएन मस्तराम भएर लागियो घर । घोराहीमा भाउजूले स्काइ लान भन्दै हुनुहुन्थ्यो तर मैले लगिनँ । कारण कहिलेकाहीँ सारा चिजबाट छुटेर बिन्दास हुन मन लाग्छ । कस्तो हुँदोरहेछ सूचनाका सारा साधनबाट कटेका क्षण अँ तिहारताका किनें । तलबजति त्यसैमा गयो । अब गर्ने के घरभाडा अघिल्लो महिनाकै बाँकी थियो एक हजार । यसपालिको थपिएपछि पुग्यो ५ । गर्ने के हलाक भइयो । दुईचार हजारको जागिरेका लागि अलिकति सन्तुलन बिग्रनेबित्तिकै सबथोक बिग्रने रहेछ । थाहा छैन उलार भएको मेरो जीवनशैलीको यो भाग कहाँ गएर सही ट्रयाकमा आउने हो राम जाने ।
धेरै समयपछि जनमुक्ति सेनाको पाँचौं डिभिजनको सहायक शिविर उङाबाट अजयशक्तिले फोन गर्नुभयो बेलुकीपख । धेरै समयपछि आज हाम्रो बैठक बसेको थियो । बैठकमा नयाँ केही कुरा भएन । तलबका केही कुरा भए । समाचारका बारेमा पनि । बैठकमा भएकाले अजयको फोनमा गफ गर्न पाइनँ । कल ब्याक गर्छु भनेर राखें । केही समयपछि प्रयास गरें तर फोन लाग्दै लागेन । सायद किताबबारे कुरा गर्नलाई फोन गरेका थिए होला । रुकुमको हुकामका अजयशक्तिको किताब मैले हेरिरहेको छु । सोलुको कारबाहीमा घाइते भएपछि उनलाई उनका कमरेडहरुले जंगलमै छाडेर िहंडेका थिए । दयालु तामाङ बाबा र पछि गुम्बाका लामाले उनलाई दोस्रो जीवन दिएका थिए । उनी केही संचो भएर साथीहरुको सम्पर्कमा पुग्दा दुई महिना नाघिसकेको थियो भने उनी जनयुद्धका महान सहिदमा दरिएका थिए । कार्यक्रम भयो । कार्यक्रममा थिए त्यसबेलाका कमाण्डर रितबहादुर खड्का । उनले सहिदका लिष्टमा सजाइएको उनको नाम आफैलाई काट्न लगाएछन् । कस्तो अनुभूति गरे होलान् हँ सहिदको लिष्टबाट आफ्नो नाम हटाउँदा त्यसपछि उनी उपचारको लागि भारत जाँदै गर्दा हेटौंडामा पक्राउ परे । लामो समयसम्म बेपत्ता पारिए । त्यसपछि उनी जेलमा बसे २ बर्ष त्यसपछि उनी गए फेरि जनमुक्ति सेनामा । केही लडाइँमा पुनः सहभागी भए । अचेल उनी जनमुक्ति सेनाको अस्थायीशिविरमा बसिरहेका छन् । कुनै बेला मनमा उनेको थिएँ -माओवादी जनयुद्धबारे एउटा उपन्यास लेखूँ । १० वर्षको नेपाली जीवनशैली उतारियोस् । जनयुद्धका झरीले भिजेका नेपाली जीवनका केस्राकेस्रा आओस् । तर अजयको संस्मरण पढ्न थालेपछि उपन्यासको आधा तिर्खा त मरिसकेछ । उनको जीवनको कथा र उनले काटेका उकालीओराली कुनै उडन्ते उपन्यासभन्दा कम्ति छैन । पढ्दापढ्दै होइन कि होइन कि जस्तो लागिरहन्छ । तर उनले काटेको उनले भोगेको जीवनका उकालीओराली भने तिनै थिए । कुनै याममा मैले पढेका रुसी चीनिया र भियतनामी उपन्यासको पात्रमा के फरक छ अजयशक्ति अझै पनि सोचिरहेको त्यो अनुहार । के अजयले अरु पनि लेख्ला कामना गरौं -फेरि आउने छ । आउने छ । जारी रहनेछ अजयको यात्रा ।
Posted by Nabin Bibhas at 7:27 AM No comments:
हिजो मेरो न्यूज गएन । अबेर मात्र अर्को एंगलबाट लेख्न भनिएको थियो जाँगर चलेन िहंडें । बिहान पासाङ दाइको डेरा सुकेधारा गएँ । माओवादी रोल्पा इन्चार्ज सिजल दाइसँग भेट भयो । केही कुराकानी भयो । पासाङ दाइसँग भेट भएन । भाउजूसँग पुराना कुरा भए । हिजो मात्र प्रकाश दीपेश र मनोजहरु रोल्पाबाट आएका रहेछन् । रोल्पा नै पुगेजस्तो लाग्यो । अफिस फर्कंदा १ बजिसकेको थियो ।
Posted by Nabin Bibhas at 1:03 AM No comments:
फेरि सुरु भएको छ सिसीफसको कथा । कहाँ के भयो खोज । लेख । टेन्सन । जनमुक्ति सेनाको क्याम्पमा बस्दाखेरि त यी सारा टेन्सनमुक्त भएको थिएँ । अब जागिरको टेन्सन थालिएको छ ।थाहा छैन रिप्रुेस भएको क्यान्टोन्मेन्टको तिहारले कतिसम्म धान्ने हो
यसपालिको तिहार मेरो लागि स्मरणीय रह्यो । सधैं झैं गाउँ या काठमाडौंमा मनाइने तिहार यसपालि जनमुक्ति सेनाको शिविमा अत्यन्तै भिन्न रह्यो । सहोदर दिदीबहिनीबिनाका मेरा तिहार केही तीता केही मीठा सम्झना छाडेर जान्थे । तर जनमुक्ति सेनाको क्याम्पमा ती कुनै अनुभूति हुन पाएन । सबैभन्दा सुखद् यही रह्यो मेरो लागि । मैले फेसबुकमा राखेका जनमुक्ति सेना क्याम्पका फोटो केपी ढुंगानाले आफ्नो ब्लगमा राखेछ । साथीले कतै पनि क्याम्पसन नलेखेर तल पुछारमा भँगेरा टाउके अक्षरमा हटारुका ब्लगर हुन् भनेर लेखिटोपलेछ । अफिसमा एकछिन भेट त भएको थियो तर कुरा हुन पाएको छैन । साथीले छापेछ अनुमतिबिना नै । साथीको चाला गतिलो लागेन । नोट ःब्लगको गुरु भन्दैमा जे पायो त्यै गर्ने यार
Posted by Nabin Bibhas at 5:13 AM No comments: